guuleed – Page 3 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
guuleed 3002 posts 4 comments
Dhageyso Warka Subaxnimo Ee Radio Alfurqaan .
guuleed	 Jun 9, 2019 0
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Halkan kala deg Warka Subaxnimo 09 06 2019 sax ah
Dhageyso Barnaamjika Dhuuxa Wareysiyada
guuleed	 Jun 8, 2019 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah. Halkan ka dhageyso dhuuxa wareysiyada 08 06 2019.
Dhageyso Warka Duhurnimo Ee Radio Alfurqaan .
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan. Halkan kala deg warka duhurnimo 08 06 2019 sax
halkaan ka dhegeyso warka subaxnimo
guuleed	 Jun 5, 2019 0
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbneynaa warka subaxnimo oo qodobo kala duwan lagu soo qaatay. Halkaan ka dhegeyso war subax 05 06 2019
Halkaan ka dhegeyso khudbadaha ciidda
guuleed	 Jun 4, 2019 0
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan khudbadaha ciidda ee laga jeediyay fagaarayaal ku yaalla wilaayaatka Islaamiga ah. waxaa sidoo kale khudbadaha ka mid ah kelimed dheer oo uu jeedinayo…
Saakow iyo sida loooga ciiday (Bar=Gaar+Sawiro)
iyadoo dunida muslmiinta maanta si weyn looga ciiday ayaa wilaayaatka islaamiga ah ee soomaaliya maanta waxay ahaayeen kuwo ciidoodu aad u heer sareyso. Degmada saakow ee gobalka jubada dhexe ayaa ka mid ah meelaha farxadda derejadeedu…
guuleed	 Jun 3, 2019 0
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa warka duhurnimo oo qodobo kala duwan lagu soo qaatay. Halkaan ka dhegeyso war duhur 03 06 2019.
Halkan ka dhageyso warka subaxnimo ee Alfurqaan.
guuleed	 Jun 2, 2019 0
warka subaxnimo waxaa saakay lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan kala deg warka subaxnimo 02 06 2019.
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 26-09-1440
guuleed	 May 31, 2019 0
Barnaamijka Dhacdooyinka dunida islaamka waa todobaadle maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato akhbaaraadkii ugu waaweynaa caalamka. Tayo sare ku dhageyso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka…
Insha Allaah halkaan ka dhegeyso warka duhurnimo oo qodobo kala duwan lagu soo qaatay. Halkaan ka dhegeyso war duhur 31 05 2019.